Ucwaningo olungobulili lumbeke ebalazweni lomhlaba - Ilanga News
Home Izindaba Ucwaningo olungobulili lumbeke ebalazweni lomhlaba
Ucwaningo olungobulili lumbeke ebalazweni lomhlaba
Uhlonishwe ngendondo iPresident's Award
UBEKWE ebalazweni lomhlaba wucwaningo oluthinta ezobulili emkhakheni wobuthi-shela, usolwazi osemncane wase-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ohlonishwe yiNational Research Foundation (NFR), ngocwaningo lwakhe olusetshe-nziswa ngisho nasemanyuvesi akwamanye amazwe.
USolwazi Thabo Msibi (36), oyiNhloko neDean yeSchool of Education e-UKZN, uchonywe uphaphe lwegwalagwala yiNRF ngendondo ebizwa ngePresident’s Award ngenxa yombiko wocwaningo lwakhe oluthinta ngqo umkhakha weziqu kweze-mfundo, ikakhulukazi kwezobuthishela.
Ucwaningo belugxile ekuzifihleni kwabanye othisha ngobulili babo nokungalingani ngokobulili emsebenzini wabo.
Lo mklomelo unikezwa abacwaningi abaneminyaka engaphansi kuka-35, abenze ucwaningo olusezingeni eliphezulu lwashicilelwa ukuze luse-tshenziswe kwezemfundo.
USolwazi Msibi ungowokuqala eNingizimu Afrika ukuhlonishwa yiNFR emkhakheni wezemfundo, kanti uthi indlela ajabule ngayo, uzibona ungamfanele lo mklomelo.
“Bengibambe umoya ngoba kuthathe izinyanga eziwu-18 ngilindele ukuthola imiphumela kule nhlangano.
“Ukuhlonishwa kwami ngale ndlela kusho lukhulu nokuthi ngisebenza kanzima ngokubambi-sana nozakwethu enyuvesi,” kusho uSolwazi Msibi. Uqale
ukwaziwa ngesikhathi eba yi-dean encane kunawo wonke eNingizimu Afrika ngo-2017 eneminyaka ewu-34.
ngonyaka ophelile wahlonishwa yiColumbia University yase-USA, ngeDistinguished Alumni & Early Career Award.
Ekuhlonishweni kwakhe, kwaze kwaqoshwa igama lakhe kwisigcinamagugu sesikhungo ngenxa yocwaningo lwakhe olunzulu oluthinta izihloko zokulingana kobulili emkhakheni wobuthishela nezemfundo.
USolwazi Msibi ungumbhali wencwadi ethi, Hidden Sexualities of South African Teachers: Black Male Educators and Same sex Desire, kanti ungumsunguli weCommunity Development Association, okuyinhlangano ehlose ukuthuthukisa umphakathi kwezemfundo.
Wathola iziqu zobuthishela e-UKZN ne-honours kusona lesi sikhungo. Uphothule iMasters kwezobuthishela eColumbia University, e-USA wathola iPHD yobuthishela e-University of Cambridge, e-United Kingdom.
USolwazi Msibi usemabhodini amaningi okucwaninga emazweni ahlukene, okubalwa iGender and Education, iJournal of LGBT Youth, i-Education for Journal of Gender and Language.
Ubehlala ekomidini elikhulu likazwelonke eliqokwe nguNgqo-ngqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, elibheka izincwadi ezifundwa ezikoleni.
Previous articleIChiefs nezinhlelo zokubolekisa umdlali
Next articleUvalo emndenini wetshitshi elisatshiswa ngokudlwengulwa